बाढीपीडित भेट्न गएकी मेलानियाको ‘पेन्सिल हिल’ चर्चामा
द न्यूयोर्क टाइम्स अमेरिका, भदौ १४
अमेरिकाको टेक्सासमा आँधीपछि आएको बाढीले १४ जनाको ज्यान गएको छ। सयौं घाइते छन् भने हजारौं विस्थापित भएका छन्।
‘हार्भी’ नामक आँधीले ह्यूस्टनको जनजीवन प्रभावित पारेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधबार पत्नी मेलानियाँसगै स्थलगत निरीक्षणमा निस्किए।
यसमा राष्ट्रपतिको भ्रमणले भन्दा मेलानियाले लगाएको ‘पेन्सिल हिल’ ले बढी चर्चा पायो।
टेक्सास जान भनेर ह्वाइट हाउसबाट निस्कँदा मेलानियाले लगाएको पहिरनले सबैको ध्यान तान्यो।
झमझम पानी परिरहेका बेला ठूलो छाता ओढेर मेलानिया जहाजसम्म गएकी थिइन्। उनी कालो चस्मा र गाढा हरियो (ओलिभ) रङको ज्याकेटमा सजिएकी थिइन्। गोलीगाँठोभन्दा माथि आउने खुकुलो कालो ‘चुज’ पाइन्टसँग उनले लगाएकी थिइन्, ‘पेन्सिल हिल’।
सँगैका ट्रम्प सेतो सर्टमाथि कालो ज्याकेट र घ्यू रङको पाइन्टमा निस्केका थिए। आफैं छाता ओेढेका उनले ‘बुट’ लगाएका थिए।
टेक्सासको यो भ्रमणमा मात्र होइन, मेलानियाले लगाउने हिल बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छ। ट्रम्पको निर्वाचन अभियानदेखि नै मेलानियाले नछाडेको ‘हाइ हिल’ उनको ‘ट्रेडमार्क’ नै बनिसकेको छ।
प्राकृतिक प्रकोपपीडितका संवेदना बुझ्न जाँदा पनि उनले आफ्नो ‘ट्रेडमार्क’ कायमै राखिन्। ‘पेन्सिल हिल’ लगाएकी मेलानियाका तस्बिर ट्वीटरमा छाएपछि एउटै प्रश्न ओइरियो– प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गर्न जाँदा सबैभन्दा सहज अग्लो हिल हुन्छ र?
श्रीमानको पहिरन परिस्थिति सुहाउँदो हुँदा श्रीमतीको नहुनुले ह्वाइट हाउस प्रशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। प्रशासकीय र राष्ट्रपतिको पारिवारिक पक्षबीच बेमेल भएको टिप्पणी गरिएको छ।
यद्यपि, यो टिप्पणी मेलानिया टेक्सास पुगेपछि खल्लो भएको छ। जब उनी टेक्सास पुगेर जहाजबाट झरिन्, ह्वाइट हाउस प्रशासनको ‘असमन्वय’ भन्दा बढी उनको ‘हिल क्रेज’ देखियो। टेक्सासमा जहाजबाट ओर्लंदा मेलानियाको पहिरन पूरै बदलिएको थियो।
उनी खुला सेतो सर्ट र कालो पाइन्टमा देखिइन्। कालो क्याप लगाएकी उनले चस्मा लगाइरहेकै थिइन्। एक खाले ‘हुलिया’ मा जहाज चढेकी मेलानिया ओर्लंदा बेग्लै देखिइन्। सबैभन्दा अलग चर्चामा उनको जुत्ता थियो। त्यतिबेला उनी सेतो स्पोर्टस् जुत्ता लगाएर जहाजका खुड्किला झर्दै थिइन्। उनको ‘ट्रेडमार्क’ अग्लो जुत्ता गायब थियो।
मेलानियाको फेरिएको पहिरनले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुनः खिच्यो।
के मेलानिया जहाजमा बस्नमात्र ‘पेन्सिल हिल’ मा ठाँटिएकी थिइन्? सबैको चासो यही छ।
वासिङटन डिसीस्थित ह्वाइट हाउसबाट टेक्सास कोर्पस क्रिस्टीसम्मको उडान अवधि बढीमा ५ घन्टा छ।
‘उसो भए के मेलानिया त्यही ५ घन्टा भए पनि आफ्नो ‘ट्रेडमार्क’ कायम राख्न चाहन्थिन्?’
अथवा, जहाज चढिसकेपछि आफूले अग्ला जुत्ता लगाएको तस्बिरबारे सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भएको देखेर उनको सोच र पहिरन दुवै फेरियो?
पहिरनबारे उनको खास मानसिकता अझै प्रस्टिएको छैन।
यसका दुई मुख्य कारण हुनसक्छन्।
पहिलो, पूर्वमोडल मेलानिया ‘फेसन आइकन’ हुन्। उनले प्रयोग गर्ने हरेक सामग्री, पहिरन र गरगहना विशेष हुन्छन्। ती चर्चामा आउँछन्।
फेसन आइकन भएकै कारण हिल नछाड्ने उनले मौसम र अवस्था वास्तै नगरी ‘पेन्सिल हिल’ लगाएकी हुन सक्छिन् भन्ने धेरैको अड्कल छ।
दोस्रो कारण ह्वाइट हाउसको ‘असमन्वय’ नै हुनसक्छ।
ट्रम्प र मेलानियाको सम्बन्ध ‘राम्रो छैन’ भन्ने थुप्रै प्रमाणसहित खबर बाहिरिएका छन्। यही तिक्तताले दुईबीच टेक्सास भ्रमणबारे सरसल्लाह नभएको वा कम भएको हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।
मेलानियालाई यस्तो परिस्थितिमा कस्तो पहिरन लगाउने भनेर ह्वाइट हाउस प्रशासनले नै ‘सचेत’ गराउनुपर्ने हो। उनलाई यसबारे ह्वाइट हाउसले जानकारी नै नदिएको पनि हुनसक्छ।
पहिरन पछाडिको रहस्य अज्ञात रहे पनि मेलानियाले आलोचना भने निकै खेप्नुपरेको छ।
धेरैको आलोचनाबीच केहीले भनेका छन्– ‘टेक्सासमा प्रकोप र समस्या जारी छ। मान्छेलाई भने मेलानियाको जुत्ताको चिन्ता छ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति पत्नीले आफ्ना देशवासीको पीडा बुझ्न जाँदा लगाउने पहिरनले सबैको ध्यान खिचिनै हाल्छ। यसमा समझदारी भनेको यस्ता कुराबारे ‘सचेत’ हुनु नै हो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १४, २०७४, ०७:०८:००
डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि एनआरएन अमेरिकाको अपिल
अन्जु र राजुको अमेरिका कन्सर्टले सहयोगका लागि उठायो ६९ लाख
अमेरिका जाने भन्दै नाइजेरियामा अलपत्र २ नेपाली स्वदेश फर्किए
भर्जिनियामा हत्या गरिएका रेशमको परिवारका लागि ८२ हजार डलर संकलन
टेक्ससका नेपाली उद्यमीबीच ‘पूँजी कसरी जुटाउने’ विषयमा छलफल